उपत्यकामा थपियो निषेधाज्ञा ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/उपत्यकामा थपियो निषेधाज्ञा ?
काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा जारी राख्ने तयारी भएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच मङ्गलबार भएको छलफलमा निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याउनेबारे छलफल भएको हो । यद्यपि निर्णय भने भइसकेको छैन । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले थप एक साता निषेधाज्ञा जारी राख्ने विषयमा छलफल भएको तर निर्णय बुधबार मात्र हुने जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञा थपिएसँगै सङ्क्रमितहरूका लागि आइसोलेसन सेन्टर बढाउन र प्रभावकारी ढङ्गले सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिने बताइएको छ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
काठमाडौंको शंकरापुरमा एक दम्पत्ती मृत भेटिए
सुनसरीमा ट्रक र बस ठोक्किंदा ३ जनाको मृत्यु, १३ जना घाँइते